Inona no tokony ho fantatr'ireo mpivarotra momba ny fiarovana ny fananana ara-tsaina | Martech Zone
Satria ny marketing sy ny asa fandraharahana rehetra - dia nanjary niantehitra bebe kokoa tamin'ny teknolojia, ny fiarovana ny fananana ara-tsaina dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ireo orinasa mahomby. Izany no mahatonga ny ekipa marketing rehetra tsy maintsy mahatakatra ny fototr'izany lalàna momba ny fananana ara-tsaina.
Inona ny fananana ara-tsaina?
Ny rafitra ara-dalàna amerikana dia manome zon'olombelona sy fiarovana sasany ho an'ny tompona trano. Ireo zon'olombelona sy fiarovana ireo dia manitatra mihoatra ny faritanintsika amin'ny alàlan'ny fifanarahana ara-barotra. Ny fananana ara-tsaina dia mety ho vokatry ny saina arovan'ny lalàna amin'ny fampiasan'ny hafa tsy ara-dalàna amin'ny varotra.
Ny fananana ara-tsaina - ao anatin'izany ny famoronana, ny fomba fandraharahana, ny fizotrany, ny famoronana, ny anaran'ny orinasa ary ny logo - dia mety ho anisan'ny fananana sarobidy indrindra amin'ny orinasanao. Amin'ny maha-tompona orinasa anao dia tokony hahatakatra ianao fa ny fiarovana ny fanananao ara-tsaina dia manan-danja toy ny fiarovana ny fananana hafa amin'ny volanao. Tokony ho fantatrao ny zony sy ny andraikitra mifandraika amin'ny fanatsarana sy fanangonam-bola ny fanananao ara-tsaina.
Fampiasana lalàna IP hiarovana ny fanananao ara-tsaina
Misy karazany efatra ny fananana ara-tsaina: patanty, mari-barotra, zon'ny mpamorona, ary tsiambaratelo momba ny varotra.
Raha namolavola haitao ara-pananana ianao, ny fiarovana ny patanty federaly dia manome ny orinasa anao hanana zo manokana hanao, hampiasa, hivarotra na hanafatra ilay forona na hahitana mandritra ny fotoana voafetra. Raha mbola novelabelarina sy ilaina ary tsy misy fotony ny teknolojia misy anao dia azonao omena zony manokana ny fampiasana azy izay hitohy mandritra ny fotoana iainan'ny patanty.
Ny fametrahana ny patanty dia mety ho dingana sarotra sy lava. Etazonia dia miasa amin'ny alàlan'ny fametrahana rakitra voalohany, fa tsy ny rafitra mpamorona voalohany, izay midika fa ny mpamorona manana daty fametrahana voalohany indrindra dia hahazo ny zon'ny patanty. Izany dia mahatonga ny fotoana anaovan'ny filanao fanakianana ho zava-dehibe. Mba hitehirizana ny daty fametrahana azy taloha, orinasa maro no misafidy ny hanao tahiry aloha hahazoana patanty vonjimaika azo antoka. Manome azy ireo herintaona hamenoana ny fampiharana patanty tsy vonjimaika.
Zava-dehibe ny fanekena fa ny patanty navoakan'ny United States Patent and Trademark Office (USPTO) dia mihatra any Etazonia ihany. Raha mifaninana any ivelany ny orinasanao ary mila fiarovana patanty any amin'ny firenen-kafa dia tsy maintsy mihatra ianao na aiza na aiza tadiavinao fiarovana. Ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny patanty dia manamora kokoa izany amin'ny alàlan'ny fombafomba hametrahana fangatahana patanty iraisampirenena iraisana miaraka amin'ireo firenena mpikambana 148.
Araka ny fantatry ny matihanina amin'ny marketing, ny marika famantarana dia fomba iray lehibe hiarovana ny marika amina orinasa iray. Ny marika famantarana dia miaro izay marika miavaka, toy ny sary famantarana na marika, izay manavaka ny marikao amin'ny hafa eny an-tsena.
Ny fampiasana marika amin'ny varotra fotsiny dia mety hitarika fiarovana amin'ny lalàna mahazatra. Na izany aza, ny fisoratana anarana ny marikao amin'ny USPTO dia tsy vitan'ny hoe miaro anao fa voaro tanteraka ianao, fa mampitombo ny andiam-panafody azo omena anao raha misy manitsakitsaka ny mari-pamantarana anao. Ny fisoratana anarana noho izany dia manome tombony lehibe ho an'ny orinasa, ao anatin'izany ny fampandrenesana mahasoa ho an'ny besinimaro, ny zony manokana hampiasa ny marika mifandraika amin'ny sokajin'ny entana na serivisy voasoratra ao amin'ny fisoratana anarana, ary ny antony federaly hanaovana hetsika raha misy fandikan-dalàna.
Ny fivarotana marika iray dia misy amin'ny ankapobeny ny famoronana sanganasa tany am-boalohany, na amin'ny endrika sary dokam-barotra, dika mitovy amin'ny fanitsiana na zavatra tsotra toa tsotra toy ny lahatsoratra media sosialy. Ireo karazana asa ireo dia azo arovan'ny zon'ny mpamorona. Ny zon'ny mpamorona dia endrika fiarovana iray omen'ny lalàna federaly momba ny zon'ny mpamorona ho an'ny “sangan'asa mpanoratra tany am-boalohany” napetraka ao anaty fomba fanehoana azo tsapain-tanana. Mety tafiditra ao anatin'izany ny sangan'asa navoaka na tsy navoaka toa ny tononkalo, tantara an-tsary, sarimihetsika, ary hira, ary koa kopian'ny dokam-barotra, sary kanto, volavola, rindrambaiko solosaina, ary koa ny maritrano.
Ny mpihazona ny zon'ny mpamorona dia afaka manakana ny hafa tsy hivarotra, hanao, hampifanaraka, na hamerina asa tsy misy alalana — eny fa na dia asa mitovy amin'izany aza no ampiasaina amin'ny tanjona iray. Zava-dehibe anefa ny manamarika fa ny zon'ny mpamorona dia miaro ny endrika fanehoana fotsiny fa tsy ny tena zava-misy, ny hevitra, na ny fomba fiasa.
Amin'ny ankapobeny, ny zon'ny mpamorona dia miraikitra ho azy amin'ny mpamorona sanganasa vaovao amin'ny fotoana namoronana azy, fa azonao atao ihany koa ny misafidy ny hisoratra ara-dalàna azy ireo any amin'ny United States Copyright Office. Ny fisoratana anarana dia manome tombony lehibe, ao anatin'izany ny fananana firaketana an-tsoratra ny zon'ny mpamorona, ny fiheverana ny fahamendrehana sasany, ary ny zona hitondra fitsarana noho ny fandikan-dalàna ary hanangona ny mety ho simba ara-dalàna sy ny saram-pandrika. Ny fisoratana anarana amin'ny US Customs dia ahafahanao misoroka ny fanafarana dika mitovy amin'ny asanao.
Ny sokajy fananana ara-tsaina iray hafa izay zava-dehibe hiarovana dia ny tsiambaratelon'ny varotra ataon'ny orinasanao. Ny "tsiambaratelon'ny varotra" dia faritana ho tsiambaratelo, fampahalalana momba ny fananana izay manome tombony amin'ny fifaninanana ny orinasanao. Izany dia afaka mampiditra na inona na inona manomboka amin'ny lisitry ny mpanjifa ka hatramin'ny teknika famokarana ka hatramin'ny fomba fanaovana an-tsokosoko. Ny lalàna dia mihevitra ny mombamomba anao hanana tsiambaratelo momba ny varotra rehefa:
Ny fampahalalana dia raikipohy, lamina, fanangonana, programa, fitaovana, fomba, teknika, fizotra na fitaovana arovana hafa;
Ny tsiambaratelony dia manome ny orinasa lanja ara-toekarena tena izy na mety tsy ho fantatra na mora fantarina; ary
Ny orinasa dia mitaky ezaka mety hitazomana ny tsiambaratelony.
Voaro mandritra ny fotoana tsy voafetra ny tsiambaratelo momba ny varotra mandra-pahatongan'ny fanambarana ampahibemaso ny zava-miafina. Ny orinasa rehetra noho izany dia tokony hisoroka ny fampahalalana tsy nahy. Ny fampiharana ny fifanarahana tsy fampahafantarana (NDA) miaraka amin'ireo mpiasa sy ny antoko fahatelo no fomba mahazatra indrindra hiarovana ny tsiambaratelon'ny varotrao. Ireo fifanarahana ireo dia mamaritra ny zony sy ny adidy mifandraika amin'ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ary manome anao tombony raha sendra diso ny tsiambaratelon'ny varotrao.
Ny fanodinkodinam-bola dia mitranga rehefa ny tsiambaratelo momba ny varotra dia azo amin'ny fomba tsy mety na amin'ny alàlan'ny fanitsakitsaham-pitokisana, ary azo atao amin'ny fitsarana. Ny habetsaky ny fampiasan'ny orinasanao NDA dia mety ho anton-javatra ampiasain'ny fitsarana hamaritana raha toa ianao ka nanao “ezaka araka ny antonona hitazonana tsiambaratelo”, noho izany dia zava-dehibe ny manome antoka fa mampiasa NDA voarindra ny orinasanao noho ny fiarovana IP anao .
Mpisolovava IP za-draharaha no laharam-piarovana voalohany
Ao anatin'ny tontolon'ny fifaninanana ankehitriny, tsy maintsy takatry ny orinasanao tanteraka ny fananany ara-tsaina sy miaro azy ireo tsara. Ny mpisolovava manam-pahaizana dia afaka manampy ny orinasanao hampitombo ny tombony amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny paikady fiarovana IP feno.
Ny mpisolovava IP anao no laharana voalohany fiarovanao amin'ny hafa mampiasa na manararaotra ny IP-nao. Na mpiara-miasa amin'ny mpisolovava mahay any ivelany ianao, toa ny amin'ny Network Network, na manakarama mpanolotsaina maharitra ao an-trano, ny mpisolovava IP dia manana fitaovana tsara indrindra hitazomana ny IP ho tombony mifaninana tokony ho izy.
Tags: Copyrightfananana ara-tsainaiplalànaara-dalànamari-pamantarana ara-dalànajerenapriori ara-dalànamari-barotra voasoratra anaranatmtsiambaratelo momba ny varotrafamantarana
Paige Zandri, talen'ny Network Attorney ao amin'ny Priori Legal, dia tompon'andraikitra amin'ny fampivelarana ny tamba-jotra mpisolovava amin'ny faritany iasan'ny Priori. Paige dia mpisolovava taloha tao NYC ary mpiara-miasa amin'ny Komitin'ny Solo sy ny orinasa madinidinika ao amin'ny Fikambanan'ny mpisolovava an'ny New York County. Paige dia nahazo diplaoma tamin'ny Brooklyn Law School ary mpilalao softball an'ny Division I tao amin'ny University of Maryland, County Baltimore.
Paikady manan-danja 7 SEO tokony hapetrakao amin'ny 2016